Oge: 2020-08-27 Hits: 29
3. Site n'oge ruo n'oge dochie ebua plọg
Ọrụ nke plọgọkụ bụ iji ọkụ eletrik dị elu na-agbanye ngwakọta. Ọ bụrụ na emebi, ike mgbanye ga-ada, ngwakọta ga-ere ọkụ na-enweghị isi, na-ebute nwayọ ụgbọ ala na-arịwanye elu yana mmụba mmanụ ọkụ. Oge ndụ nke ihe ọkụ ọkụ nkịtị bụ naanị 30,000- 50,000 kilomita, oge ndụ nke iridium gold spark plọg. bụ ihe dị ka kilomita 50,000-80,000, oge ndụ palọtịn ndị plọg ga-eru kilomita 100,000!
4. 80,000-110 puku kilomita, dochie ikuku oxygen
Nke a bụ a seramiiki mmewere emi odude ke iyuzucha anwụrụ nke engine, eji ịchọpụta na ịchịkwa ruru nke oxygen mmanụ ụgbọala. Mgbe ogologo oge e jiri ya mee ihe, kọmputa nke usoro ntinye mmanụ ọkụ eletrik enweghị ike ịnweta ozi nke ikuku oxygen na ọkpọkọ iyuzucha. Theta gas agwakọtara agwakọta na-adị elu, mmanụ ọkụ na-arịkwa elu. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ nke ihe mmetụta oxygen, nke na-adịkarị mkpa ka edochi ya mgbe ọ dị kilomita 80,000-110,000.
5. Na-agbanwe batrị mgbe niile
Batrị na-achịkwa sekit n'ime ụgbọ ala ahụ, gburugburu ahụ nwere njikọ chiri anya na sekit mmanụ. N'ihi na batrị n'ozuzu ga-enwe ụkọ ọkụ eletrik maka afọ 2-3 nke ojiji, na-eme ka volta ọkụ na-ezughị ezu, moto ahụ na-eme ka injin ahụ ghara ịdị ike, ike ọkụ ahụ na-adịkwa ala, ya mere mmanụ ọkụ na-arị elu. Ya mere echela na batrị nwere ike ịga n'ihu na-eji na-enweghị mmebi. Iji belata oriri mmanụ, a ga-edochi batrị oge niile.
6. Nlekọta ụgbọ ala mgbe niile
Gbọ ala ndị dị ka ahụ mmadụ kwesịrị ka edobe anya ma na-emelitekwa ya oge niile. O zughi iji dochie mmanụ ụgbọala na mmanụ injin. Ọ dịkwa mkpa ka edochi ụfọdụ akụkụ ndị merela agadi. General akpaaka akụkụ nwere ụfọdụ ndụ okirikiri, nke karịrị ojiji. Na
oke oge ga - emetụta arụmọrụ nke ụgbọ ala ahụ, ọbụlagodi iweta nsogbu nchekwa. Yabụ, dị ka akwụkwọ ntuziaka ndị nrụpụta si, dochie ya n'oge dịka ọnọdụ ụgbọala si dị.
Previous: Kedu nsogbu ga - eme ma ọ bụrụ na ejighị ụgbọ ala ahụ ogologo oge?
Ọzọ: Ihe ịrịba ama 7 tupu ụgbọ ala mebie